फोर्ड एन्डेभर चितवनको बजारमा, डा.भि नटराजप्रसादले गरे लन्चिङ्ग (तस्वीर र भिडियोसहित) – Saurahaonline.com
फोर्ड एन्डेभर चितवनको बजारमा, डा.भि नटराजप्रसादले गरे लन्चिङ्ग (तस्वीर र भिडियोसहित)
चितवन, २० साउन । चितवनको बजारमा एसयुभी फोर्ड एन्डेभर कार लन्चिङ्ग गरिएको छ ।
पहिलो पटक शोरुममा नै बिक्रि गर्न १ करोड ३० लाख रुपैया मुल्य पर्ने फोर्ड एन्डेभर राखि चितवन आसपासका जिल्लाका ग्राहक वर्गहरुलाई लक्षित गरि फोर्ड एन्डेभर कार लन्चिङ्ग गरिएको हो । विश्व विख्यात फोर्ड कारको चितवनका लागि आधिकारिक विक्रेता सेढाई होल्डिङ्ग ग्रप अन्र्तगतको एस.एच मोर्टस् चितवनमा लन्चिङ्ग गरेको एस.एच मोर्टस्का प्रबन्ध निर्देशक निर्देश सेढाईले बताए । फोर्ड एन्डेभर कार एक भव्य समारोहका विच कलेज अफ मेडिकल साईन्सेस शिक्षण अस्पताल ( पुरानो मेडिकल कलेज) का निर्देशक डा.भी नटराज प्रसादले गरेका थिए । सो अवसरमा बोल्दै उनले महंगो र सुविधायुक्त कार चढ्ने ग्राहकवर्गहरु माग पुरा गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
यस अघि महंगो कारहरु बुक गरे मात्रै यहांका विक्रेता चितवनमा ल्याउदै आएकोमा एसएचले चितवनमा पहिलो बिक्रिकै लागि महंगो कार बिक्रिका लागि राखेको जनाएको छ ।
नेपाली बजारमा भरखरै प्रवेश गराइएको एसयुभी फोर्ड एन्डेभर कार चितवनका् बजारमा पनि छोटो समयमा लोकप्रिय हुने विश्वास लिइएको एस.एच मोर्टस्का प्रबन्ध निर्देशक निर्देश सेढाईले बताए ।
सीटको सजिलोपना, फोर ह्वील ड्राइभ, चालकमैत्री फ्रन्टसीटका साथै आकर्षक बडी पनि यसको विशेषता भित्र पर्दछ । नयाँ फोर्ड एन्डेभर २.२ लि. र ३.२ लि. इन्जिनमा उपलब्ध छ । साथै इन्धन किफायती (कम इन्धन उपयोग) हुने गरी बनाइएकोले चितवनका कारका पारखीहरुको मन जित्ने उनले बताए । नयाँ फोर्ड एन्डेभरमा ८ वटा एयरब्याग राखिएको छ । यसमा चालकको घुँडाको लागि पनि एयरब्याग राखिएको छ ।
नयाँ फोर्ड एन्डेभर सनसेट रेड, गोल्डेन ब्रोजेन, डाइमण्ड वाईट, प्यालेथर ब्यालेक, सहितका विभिन्न ६ किसिमका रंगहरुमा उपलब्ध छ । सहज सिट, फोर ह्वील ड्राइभ, चालकमैत्री फ्रण्ट सिट तथा आकर्षक बनावट यसको प्रमुख विशेषता रहेको जनाएको छ । एस.एच मोर्टस्का प्रबन्ध निर्देश सेढाईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल सुनचादी महासंघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमान शाक्य, क्षेत्रिय होटल संघ सौराहाका प्रथम उपाध्यक्ष सुमन घिमिरे, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र गैडाकोटाका अध्यक्ष दाताराम घिमिरे लगायतले बालेका थिए ।